Samachar Batika || News from Nepal » पैसा कमाउन चाहानुहुन्छ ? यी ३ तरीका अपनाउनुहोस तपाईं सफल पक्का ,
पैसा कमाउन चाहानुहुन्छ ? यी ३ तरीका अपनाउनुहोस तपाईं सफल पक्का ,
पोखरा । धनी बन्ने सबैको चाहना हुन्छ । तर, यसको लागि धेरै मेहेनतको आवश्यक्ता पर्छ । मेहेनत सँगै यस्ता केहि कुरा छन् जसले मानिसलाई सफल बनाउँछन् ।
हामीले बिल ग्रेट, मार्क जुकरवर्ग लगायतका मानिसको व्यवसायीक सफलताका कुरा सुनेका छौं । उनीहरुको सफलताको सुत्र के हुन सक्छ भन्ने कुरामा हामी सोचि रहेका हुन्छौं ।
संसारमा हरेक मान्छेको एउटै चासो हुन्छ, पैसा कसरी कमाउने ? सुख-सयल कसरी प्राप्त गर्ने ? धेरैले वैध तरिकाबाटै धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउने सोच राख्छन् । कोही सफल हुन्छन् भने कोही अ’सफल हुन्छन् । केहीले भने अ’वैध तरिकाले पैसा कमाउन चाहन्छन् ।संसारमा अ’वैध तरिकाले पैसा कमाउने कामले भने सुख होइन, त’नाव मात्रै दिने गरेको छ । किनभने उ एकदिन फ’स्छ, फ’स्छ ।
बिजनेश र रियलटाईम फाइनान्सीयल मार्केटबारे जानकारी दिने बिजनेश स्टाटिजीस्ट ब्लगर डैन वाल्डस्चिमिदले सफलताको सुत्रहरु पत्ता लगाएका छन् ।
प्रकाशित मिति २४ माघ २०७६, शुक्रबार ०३:१३